I-Napier • Ukugcotshwa komzimba ne-NuRu Massage
INapier idolobha laseNew Zealand elinetheku lolwandle, eliseHawke's Bay ogwini olusempumalanga yeNorth Island. Inani labantu baseNapier cishe liyi-62,800 kusukela ngoJuni 2019. Cishe amakhilomitha ayi-18 (11 mi) eningizimu yeNapier yidolobha elisemaphandleni iHastings. Le mizi emibili engomakhelwane ivame ukubizwa ngokuthi “The Bay Cities” noma “The Twin Cities” yaseNew Zealand. Inani labantu baseNapier-Hastings Urban Area ngabantu abayi-123,960, okwenza kube yindawo yesithupha ngobukhulu emadolobheni eNew Zealand, elandelwa eduze yiDunedin (104,500), kanye neTauranga elandelayo (135,000).
ulimi Maori, isiNgisi